M/weyne Gaas oo soo gaba-gabayey booqashadisi Kenya saakana kusoo wajahan Garoowe – Radio Daljir
Luulyo 25, 2015 1:53 b 0
Sabti, Luuliyo 25, 2015 (Daljir)—Madaxweynaha dowladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafti Wasiirro ah oo la socday ayaa goor-dhow oo saaka ah kusoo wajahan magaalada Garoowe ee caasimada Puntland, kadib safar qaatay mudo 5-bari ah oo ayku tageen dalka Kenya.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland golayaasha dowladda saraakiisha ciidamada iyo shacabka ku dhaqan magaalada Garoowe ayaa haatan ku sugan garoonka diyaaradaha magalaada Garoowe si ay uga qayb-qataan soo dhowaynta Madaxweynaha iyo waftiga la socda.
Maamulka gobolka Nugaal oo daljir la hadlay ayaa xaqiijiyey imaanshaha Madaxweyne Gaas iyo waftigiisa oo maalinimadi shalay soo gaba-gabayey booqashada maal-maha kooban qaadatay ee ayku tageen Wadanka Kenya.
Madaxweynaha Puntland ayaa intii uu ku sugna dalka Kenya waxaa uu kulamo la qaatay madaxda dalkaasi Kenya iyo Diblamaasiyiin kale oo caalami ah, kuwaasi oo uu kala xaajooday iskaashiga dhinaca Amniga iyo xoojinta xiriirka Puntland iyo Kenya.
Sido kale Madaxweynuhu intii uu jooga Kenya waxaa uu kulamo la qaatay ganacsatada Soomaaliyeed ee kasoo jeeda deegaanada Puntland oo uu ku dhiiri-geliyey inay gudaha Puntland maalgashiyo ku sameeyaan si kor loogu qaado dhaqaalaha Dalka.
Wicii faah-faahin ah oo ku saabsan imaanshaha Madaxweynaha kala soco radiodaljir.com
DHAGAYSO: Arday Dhamaysatay xifdinta Quraanka Kariimka ah oo xaflad loo Qabtay